Ny fampiharana Apple TV dia efa misy any Mexico | Avy amin'ny mac aho
Amin'ny fahatongavan'i DTT, ny fahalalana hoe iza no fandaharana isaky ny fantsona dia tena tsotra, satria afaka miditra haingana amin'ny tari-dàlana fantsona misy ary inona ny programa, sarimihetsika na andiany izay halefa amin'ny fotoana iray, hahafahantsika mahafantatra mialoha izay mahaliana antsika indrindra.
Saingy, arakaraka ny itomboan'ny isan'ny serivisy mivantana, betsaka kokoa ireo mpampiasa no nandao ny fahitalavitra ho an'ny fampahalalana fotsiny ary nampiasa Netflix, HBO, Amazon Prime ary ny hafa mba hankafy andian-tantara na sarimihetsika. ny mametraka baiko kely amin'ity fampahalalana marobe ity, Apple dia nandefa ny fampiharana fahitalavitra tamin'ny faran'ny taona 2017, izay ahafahantsika miditra haingana ny katalaogin'ny serivisy mivantana misy.
Seho fahitalavitra sy filma maro dia maro, ka fotoana kely fotsiny hahitana azy ireo!
Ny Apple TV App dia manangona atiny avy amin'ny Apps video marobe ary manolotra tolo-kevitra momba ny fialamboly farany.
Jereo eto ny antsipiriany:https://t.co/2xiI1dV4Vb pic.twitter.com/chlsCkvshk
- App Store amin'ny teny Espaniôla (@AppStoreES) Aprily 1, 2018
Fa toy ny amin'ny rindranasa hafa, ny fampiharana TV, azo alaina ho an'ny iOS sy Apple TV, tsy misy any amin'ny firenena rehetra, fa amin'ny dropper no anaovany azy. Natomboka tany Etazonia izy io tamin'ny voalohany, ary taoriana kelin'izay dia tonga tany amin'ny Fanjakana Mitambatra, Frantsa ary Alemana. Tamin'ny fanombohana ny kinova farany an'ny iOS 11.3, ireo tovolahy ao amin'ny Apple dia nanararaotra nanitatra ny isan'ny firenena nanolorana ity fampiharana ity, i Mexico sy i Brezila no firenena izay efa azo sintonina.
Amin'izao fotoana izao, ny fangatahana fahitalavitra any Mexico Manolotra ny katalaogin'i Netflix, ny iTunes Store ary Amazon Prime Video fotsiny izy, HBO no tsy tonga voalohany. Amin'izao fotoana izao, tsy fantatsika hoe inona ny antony mbola tsy anoloran'ny Apple an'io fampiharana io any Espana ary tsy fantatray hoe rahoviana no ho tonga izany. Amin'izao fotoana izao, eo am-piandrasana ny fahatongavan'ny fampiharana TV ho an'ny Apple TV sy iOS fitaovana any Espana dia afaka mampiasa ilay rindranasa izahay JustWatch, rindranasa ahafahantsika mitady horonantsary na andian-dahatsoratra tianay ho hita ary milaza aminay hoe aiza no misy ny serivisy vidéo misy azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny fampiharana Apple TV dia misy any Mexico izao
MacOS High Sierra 10.13.4 Combo dia misy